ဂွာတီမာလာ | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဂွာတီမာလာ
Does Mayan culture pique your interest? Do you want to seealive volcano? Does visitingaplace called the Land of Eternal Spring interest you? ဒါကြောင့် အကယ်., go to Guatemala!
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်တို့အကြားတည်ရှိနေပေမယ့်, အမေရိကအလယ်ပိုင်းခရီးသွားများအတွက်ကမ္ဘာ့အများဆုံးအံ့သြဖွယ်ဂေဟစနစ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာခရီးစဉ်ဒေသ၏တဦးတည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း. အမေရိကအလယ်ပိုင်းလှပသောတောမှနေရာဖြစ်သည်, သဲကမ်းခြေ, surfing နှင့် SCUBA ရေငုပ်တူသော waterspouts, အများဆုံးဧညျ့အပန်းဖြေနေရာများအနောက်ပိုင်း hemisphere နှင့်အချို့.
Palmetto ခုံ Oceanfront Resort ကို – ဟီလ်တန်ဌာနမှူးကျွန်း, SC
Breckenridge, ကော်လိုရာဒို : သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်လမ်းညွှန်
ရောမမြို့လေဆိပ်: Rome needsanew airport.
စျေးပေါတဲ့ Airfare ရှာမည်နည်း.
10 ကိပ်တောင်းလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာသင်မပျက်မကွက်မဟုတ်နိုင်သဆွဲဆောင်မှု ‘ တောင်အာဖရိက
ကတည်းက Austin ထူးဆန်း Keeping 1839: Austin ခရီးသွားပြန်ကြားရေး
အမ်စတာဒမ်ခုနှစ်တွင်က Short စီးတီး Break များ